लेख – Ram Kumar Pariyar
२०७४ फाल्गुन २४
औचित्यहिन नारी दिवस
यसैगरी नारी दिवस मनाउन थालिएको १०८ वर्ष भईसक्यो । लामो समयदेखि महिलाहरुले संघर्ष गरे नेपालमा पनि ठूला ठूला राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनहरु भए । तर , आजसम्म नेपालमा महिला उत्पीडिनको स्थिति भयावह रहेको छ । महिला भित्रका पनि एकल महिला र सीमान्तकृत वर्गका महिलाको...
२०७४ मंसिर १
युएईका घरेलु नेपाली महिला कामदारको स्थिति
कामदार भन्छन् : छिटो बाटो खुलाउ सिन्धुपाल्चोक राम्चेकी शान्ती तामाङ सन २०१० मा दिल्ली हुँदै दलाल मार्फत दुबई आउनुभएको हो । दुबई झरेको ३ दिनमै वहाँलाई अजमानमा एक स्थानीयको घरमा काम गर्न पठाईयो । खान , बस्न सहित मासिक १ हजार दिराम वहाँले पाउने...
२०७२ आश्विन २
संविधान च्यात्ने , जलाउने होईन सम्मान गरौं
रामकुमार परियार सामन्यतया ४/५ महिनामा धान तयार हुने गर्दछ । तर लगभग ८ वर्ष मेहनत गरेर ६०१ श्रमिकले संविधान फलाए । एकपटक मरिसकेको बेर्नालाई थपघट र मलजल गरेर तंग्राई पुन: बाली दिन योग्य बनाईयो त्यही बोटले आज फल दिई छाड्यो । फल कत्तिको मीठो...
२०७२ बैशाख १३
सबै मिलि जीवन जोगाउँ,देश बचाउँ
रामकुमार परियार २०७२ साल वैशाख १२ अर्थात हिजोको दिन हाम्रा निम्ति अभिशप्त रहेछ । एउटा ईतिहास ढलेर अर्को ईतिहास ठडियो । सुनौलो ईतिहास मेटिएर कालो ईतिहास पोतियो । उफ !!! सम्झिदा मात्रै पनि कहाली लाग्छ । झन प्रत्यक्ष देख्दा वा तस्वीर,भिडियो देख्दा कस्तो हुँदो...
२०७१ माघ २७
सन्दर्भ भ्यालेन्टाईन डे को – सच्चा प्रेम गरौं
युवापुस्ता माझ निकै लोकप्रिय पर्व हो – भ्यालेन्टाईन डे,अर्थात प्रणय दिवस । त्यसतो युवा सायदै भेटिएला, जसलाई यसको महत्त्व र मिति थाहा नहोस । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा घुस्दै गएको पाश्चात्य परम्परा मध्ये निकै नाम चलेको पर्व हो भ्यालेन्टाईन डे । जुन हरेक अङ्ग्रेजी...
२०७१ माघ १६
घटना विसं १८६६ तिरको हो, जुनबेला अङ्ग्रेज फौजले नेपाल आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको थियो । उसबेला भारतको बेतियामा नेपाल जाने बाटो पहिल्याउन नसकेर अङ्ग्रेजहरु त्यही रोकिएका थिए । त्यही बेला उनीहरुले भेटे एक नेपाली बाङ्गे सार्कीलाई । अङ्ग्रेज फौजका अफिसरले उनलाई डाकेर नेपाल जाने...
२०७१ माघ ८
किन बनाउछौ आन्दोलनलाई हिंस्रक ?
रामकुमार परियार श्रीपेच ढले संगै लोकतन्त्रको उदय भएको एक दशक हुनै लाग्यो । संसार सामु मुलुकले गणतान्त्रिक देशको छुट्टै पहिचान बनायो । यसबीचमा राज्यको बागडोर सम्हाल्न धेरै अनुहारहरू आए । नयाँ शक्तिहरुले सत्ताको स्वाद चाख्न भ्याए । एउटा उदाहरणीय लोकतान्त्रिक देशको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै...
एसएलसीको परिवर्तित परिक्षा प्रणाली,एक विश्लेषण
वि.सं. १९९० देखि लागू हुँदै आएको प्रवेसिका परीक्षा अर्थात एस.एल.सि को नियमित मुल्यांकन प्रावधान लाई हालै संसोधन गरिएको छ । सामान्य मेहनतबाट उत्तीर्ण हुँदै आएका विध्यार्थिहरु दशौ श्रेणिमा पुगेर ड्ङरङ्ग पछारिदै आएका थिए । अर्थात यो तह पार गर्नु भनेको फलामे द्वार तोड्नु...